Ilhaan Cumar oo farriin culus u dirtay Farmaajo. "Waxaa la joogaa waqtigii aad bixi lahayd.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ilhaan Cumar oo farriin culus u dirtay Farmaajo. "Waxaa la joogaa waqtigii aad bixi lahayd.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ilhaan Cumar oo farriin culus u dirtay Farmaajo. “Waxaa la joogaa waqtigii aad bixi lahayd..”
Ilhaan Cumar oo ka tirsan mudayaasha Koongareeska Mareykanka, kana soo jeeda Soomaaliya ayaa ugu baaqday Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo inuu xilka ka tago.
“Farmaajo sanad ayuu dhaafay muddo xileedkiisii. Waxaa la joogaa wakhtigii uu meesha ka bixi lahaa, oo ay doorashada wakhti dheer daahday ay u qabsoomi lahayd ida ugu dhaqsaha badan” ayay tiri Ilhaan Cumar oo farriin soo dhigtay barteeda Twitter-ka.
Farriinta Ilhaan ayaa ka danbeysay qoraal kasoo baxay Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka, qeybta Afrika oo si cad loogu sheegay Farmaajo in dowladda Mareykanka ay tallaabo ka qaadi doonto cidda hortaagan nabadda iyo doorashada.
Farmaajo ayaa Weeberigii 27 Disembar 2021 isku dayay inuu shaqada ka fariisiyo Ra’iisal wasaare Rooble, isagoo ciidamo dul dhigay xafiiskiisa, balse tallaabadaasi ay fashilantay.
Previous articleMareykanka oo Digniintii ugu adkeyd toos ugu diray Maxamed Farmaajo (Akhriso)
Next articleLix Xildhibaan oo maanta lagu dooranayo Kismaayo iyo Magacyada 12 Musharax oo ku tartamaya